UWalter Isaacson uthi iApple ayisiyoyona nkampani intsha | Ndisuka mac
UWalter Isaacson uthi iApple asiyiyo eyona nkampani ivelisa izinto ezintsha
Kubo bonke abo bangamaziyo, uWalter Isaacson yintatheli, umbhali kunye nombhali webhayoloji Umbhali webali kuphela egunyaziswe nguSteve Jobs. Incwadi esungulwe ngo-Okthobha ka-2011 isekhona nanamhlanje kwaye singatsho ukuba ibingaphambi nasemva kobomi buka-Isaacson, kuba wachitha iiyure ezininzi kunye nomphathi omkhulu we-Apple ngamanye amaxesha anzima kakhulu apho imisebenzi yayiqhekeke phakathi kobomi nokufa. . Oku kwamvumela ukuba ahlangane nomphathi we-Apple oyinyani kwaye enze i-biografi ethi apha sicebisa ukuba kufundelwe wonke umntu, nokuba ungumlandeli weApple kunye noSteve Jobs.
Kodwa ukushiya bucala incwadi emnandi epapashwe ngu-Isaacson kwiminyaka emi-6 eyadlulayo, kudliwanondlebe lwamva nje CNBC, oku kuthethe malunga nenkampani ekhoyo eqhubeka nokukhula ngokuzinzileyo kwishishini apho inyathelo elingelilo linokushiya kumjelo wamanzi. Ngale ndlela, usenzile ngokucacileyo isikhundla sakhe kwinkampani namhlanje, esithi I-Apple ayisekho kwezona nkampani zintsha zobugcisa.
Ngokusengqiqweni, umntu ekwenziwa udliwanondlebe naye wanika uluvo ngemeko yeApple, echaza oko Le asiyinkampani ejonge ukhuphiswano kwaye akufuneki ihambe ngendlela yayo.Kodwa iimpendulo zinokujolisa ngakumbi kwixesha elidlulileyo kunangoku. Siyavuma ukuba iApple iphila okwexesha elidlulileyo njengazo zonke iinkampani ezenzayo kwaye ithi ayenzi nto intsha ithetha lukhulu ukuba sithathela ingqalelo izixhobo zentsimbi ezikhoyo, kodwa ngaphezulu kwayo yonke isoftware.
Ewe asinakukhanyela ukuba iApple inokuhlala yenza ngaphezulu kunamhlanje, kodwa isenokungayidingi ngoku ukuba sicinga ukuba iimveliso zayo zithengiswa ngoku kunakuqala kwaye ngokuyinxenye sibekek 'ityala ngale "non-innovation" apho U-Isaacson ubhekisa ngokuchanekileyo koku. Ngaba ucinga ukuba iApple iyekile ukwenza izinto ezintsha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » UWalter Isaacson uthi iApple asiyiyo eyona nkampani ivelisa izinto ezintsha
Inguqulelo yocingo ye-2.98 ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe. Iifowuni ziza kwi-Mac
iTunes iya kufumaneka kwiVenkile kaMicrosoft, Windows kuGcino